Njalo fan poker angathanda ukudlala poker amahora amaningi njengoba efuna. Kukhona izindawo lapho ukukunikeza ukudlala ithenisi nabangani bakho kanye nosebenza nabo. Nokho, kuzodingeka ukuba uphuma endlini yakho ukuze uthole lezo zindawo. Umdlalo poker Futhi uzodinga ukuthola isikhathi esikhululekile abe nihlangene nabangane bakho. Ngakho, labo abathanda poker abangakwazi ukuphuma njalo uyofuna isixazululo ebavumela ukudlala poker ngaphakathi ekhaya. Ake usitshele wena umdlalo poker okuzokwenza ukuthi ube isipiliyoni best of poker, futhi ngeke ube kokushiya isihlalo sakho ingasaphathwa ekhaya lakho.
World Series of Poker (WSOP) iyona kuyoziqeda izinkinga zakho poker. WSOP kuyinto umdlalo online okuyinto ake unayo yonke fun poker ngenkathi uhleli ekhaya lakho ku usofa yakho. WSOP usebenza emihle kokubili i-Android ne-iOS. Vele uya esitolo lokusebenza noma ukudlala esitolo kusuka smart phone yakho bese uthayipha World Series of Poker, download umdlalo wasiqashisa ukufaka. Uma umdlalo efakwe, une-poker endlini yakho siqu cell phone yakho. Manje ungadlala poker kuphi ufuna, kungaba lounge yakho, lokulala, ihhovisi noma ngisho ngaphandle. Vele uchofoze isithonjana on cell phone yakho bese ufaka emhlabeni poker. Ungadlala umdlalo njengoba isivakashi, noma ungangena ngemvume usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Facebook okuzoba (ngokubona kwethu) kumnandi kakhulu ukwedlula ukudlala njengesivakashi.
Azikho imithetho ethize ukudlala World Series of Poker, nje faka umdlalo bese uqale ukudlala poker njalo sengathi wayedlalela empilweni yangempela poker. World Series of Poker idla ubhedu njengoba inombolo yabasebenzisi lukhula usuku nosuku. Ukuthandwa WSOP ikakhulu incike ukufana ngempilo yangempela poker. Kunezinto ezincane, kodwa lezo zinkinga yibo ezivuma umdlalo okuthakazelisayo nakakhulu, sihehe futhi kumnandi ukudlala. I ezihluke ngazo nezinto ezifana World Series of Poker ngempilo yangempela poker yibo ezivuma umdlalo ukuthi iyini.
Lo mdlalo futhi inikeza izici ezimbalwa super cool futhi super fun okuyinto kuyogcina iminwe yakho ethe njo smart phone yakho ukudlala World Series of Poker. Ezinye izici okuthakazelisayo zihlanganisa Tournaments, uxhumano Facebook, aspect nomphakathi, Chips Mahhala, Tournament Ring, multi-ukwethulwa kanye neminye imikhakha.
Umdlalo ikakhulukazi has tournaments okuqhubekayo okukuvumela ukuba i-poker njengoba umncintiswano. Lemidlalo zibizwa imizi ehlukahlukene emhlabeni wonke. Kukhona futhi tournaments yezinkathi ezithile zazo kwenzekani iminyaka. Wena nje ukuvula umdlalo, faka kulo mqhudelwano angena maphakathi kwesikrini. Faka mqhudelwano uqale ukudlala poker njalo.
Lokhu kumele kube super cool futhi isici best of World Series of Poker ngoba uma uwine umncintiswano, uzonikezwa indandatho. Ungagcina iringi phakade ngoba lokho mqhudelwano ethize, futhi iringi azoboniswa ozayo egameni lakho uma omunye avakashela iphrofayela yakho. Ingabe akukhona lokho amangalisayo?
Multi-esethulweni sangaphambili uma esethula
Ukudlala nabanye umdlalo, uzoqaphela ukuthi kangaka ecasulayo ukulinda lapho isitha sakho kuthatha ithuba lakhe. Uya nje ahlale khona elinde abaphikisi ukuqedela ithuba lakhe. Nokho, ungenalo ukulinda manje ngoba World of Poker Series ikuvumela multi-etafuleni ngesikhathi. Kusho ungadlala kwenye etafuleni ngenkathi isitha sakho bese kuba ithuba lakhe.
Wena uzobe ukhishwa chips khulula njalo ngehora futhi uma zidlala chips ezingasho uzobe elinde wena. Lezi chips ibalulekile kakhulu World Series of Poker ngoba uzodinga lezi ukuqhubeka umdlalo
Ungase uzibuze ukuthi indlela umdlalo kungakuqinisa nomphakathi, kodwa World Series of Poker ikuvumela ukuba uxoxe abaphikisi usebenzisa izithonjana. Uma ungena ku usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Facebook, ungakwazi ukudlala ubani ukusuka noku kuphi emhlabeni (luyofika kuwe njengomuntu ukumangala). World of Poker Series has izigidi zabasebenzisi kusukela emhlabeni wonke, ukuthi yisona sizathu ungakwazi ukudlala nanoma ubani ukusuka Asia e-Australia.
Uma ungene ngemvume ku-World Series of Poker usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Facebook, zikhona izinzuzo ezithile kuso. Ungadlala nabangani bakho Facebook futhi ube mnandi eyakho. Ungase futhi ugcine intuthuko yakho bese wabelana nabangani bakho. Ukwabelana ngokunqoba yakho nabangani bakho futhi sigubha kuyajabulisa ezingaphezu kuka sigubha wedwa.
World Series of Poker izipesheli 4 ukuze 5 izikhathi kuka ijubane ukuphila kwangempela poker, futhi uma usebenzisa ukukhetha multi-ukwethulwa, ijubane kuyoba 20 izikhathi ngokushesha.
World Series of Poker khulula Chips Generator
Umdlalo ingalutha ngempela uma uthola nokujwayela. Iningi abadlali babika edlala lo mdlalo amahora ngaphandle kokuthola ukhathele. Nokho, abadlali futhi cabanga ukuthi chips khulula kule mdlalo azanele izidingo zabo amageyimu futhi uphelelwa Poker chips ngokushesha. WSOP ikunikeza ukuthenga lezi chips ukusebenzisa ikhadi lokuthenga ngesikweletu, kodwa lokho akulona nokwenzeka kuyo yonke umdlali. Ungaba supply angenamkhawulo poker khulula chips usebenzisa ithuluzi lethu. World Series of Poker Chips khulula Generator ithuluzi mahhala chips isizukulwane. Kulula ukusebenzisa, futhi wena nje kufanele uthole ithuluzi, faka imali yakho edingekayo chips bese ucindezela ukukhiqiza. Uzoba nenani olifisayo chips e-akhawunti yakho WSOP. Ithuluzi isebenza kahle kokubili Android ne-iOS ngakho yimuphi umdlali Ungayisebenzisa.
Manje athathe cell phone yakho futhi ujabulele World Series of Poker nje ufuna futhi ake ithuluzi lethu ukukhathazeka mayelana poker yakho chips.